Misy izao ny beta fahatelo ho an'ireo mpamorona ny rafitra fiasan'ny Apple vaovao | Vaovao IPhone
Angel Gonzalez | 15/07/2021 10:04 | iOS 15, About us
Roa herinandro taorian'ny nanombohana ny beta faharoa ny rafitra fiasan'ny Apple vaovao, Efa misy ny beta fahatelo ho an'ny mpamorona. Ity no fanavaozana lehibe fahatelo an'ny WatchOS 8, tvOS, iOS ary iPadOS 15, ary koa ny macOS Monterey, izay ahitàna fiasa sy fanatsarana vaovao miaraka amin'ny tanjona hahatratrarana kinova miorina amin'ny famoahana ofisialy azy amin'ny fararano. Raha izany dia, tsy misy afa-tsy vaovao ho an'ny mpamorona, ny programa beta ho an'ny daholobe dia tsy nahazo fanavaozana na dia antenaina aza fa handray azy ireo afaka andro vitsivitsy.
1 Andao handray ny beta fahatelo amin'ny tvOS, iOS, iPadOS 15, ary ny watchOS 8.
2 Ahoana ny fametrahana ireo betas developer amin'ny fitaovana
Andao handray ny beta fahatelo amin'ny tvOS, iOS, iPadOS 15, ary ny watchOS 8.
iOS sy iPadOS 15 dia nahatratra ny beta fahatelo ho an'ny mpandraharaha miaraka amin'ny dia lavitra vita ary tokony hatao. Na izany aza, mbola misy ny fiovana izay tsy mipetraka tsara amin'ny zavatra niainan'ny mpampiasa toy ny fanavaozana ny Safari. Izany no antony mitohy mampifangaro, manatsara ary manatsara ireo fanovana ireo ny asa mba hahatratrarana fitoniana tanteraka amin'ny rindrambaiko. Eo ambanin'ny kaody fananganana 19A5297e Ho avy ny beta fahatelo ho an'ny mpamorona iOS sy iPadOS 15.
Toy izany koa, miaraka amin'ny kaody 19A5297e dia tonga ny beta fahatelo an'ny watchOS 8. Rafitra miasa izay tsy voamariky ny zaza tsy ampy taona tsara indrindra nefa lalina lalina. Ny fiasa vaovao mifandraika amin'ny sehatra, ny app Sleep miaraka amin'ny fanaraha-maso ny tahan'ny taovam-pisefoana, sns.
Ary farany, raisinay ihany koa ny beta fahatelo amin'ny tvOS 15 izay tsy mitovy amin'ny fitaovana hafa ny fametrahana azy. Mba hametrahana ity fanavaozana ity dia ilaina ny ho mpamorona ary hametraka profil manokana amin'ny alàlan'ny Xcode amin'ny Apple TV resahina. Ity fanavaozana ity dia mitondra fiasa vaovao vitsivitsy: SharePlay, fahaizana mampifandray mini HomePod roa ho vokatra, fizarana temotra vaovao ao anatiny, sns.
Ahoana ny fametrahana ireo betas developer amin'ny fitaovana
Amin'ny tranga tvOS 15 dia ilaina izany hametraka mombamomba ny developer manokana amin'ny alàlan'ny Xcode amin'ny Apple TV ary avy eo miroso amin'ny fametrahana ny fanavaozana.
Amin'ny tranga watchOS 8, ilaina ny fametrahana ny iOS 15 beta amin'ny iPhone anao ary, aorian'izay, havaozy ny rafitra fiasa amin'ny app Watch. Raha manana beta faharoa an'ny iOS sy iPadOS 15 napetraka ianao, hametrahana ny ny beta fahatelo dia miditra fotsiny amin'ny fanavaozana ny lozisialy amin'ny fikirana ary miroso amin'ny fametrahana.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Vaovao IPhone » About us » Ny beta fahatelo ho an'ny mpamolavola ny rafitra miasa Apple vaovao dia efa misy
Dingana fitsapana Sugar Sugar Noninvasive Blood